China njikwa Board E Bipụtara Circuit Assembly rụpụta na Factory | KAISHENG PCB
Mkpuchi akpụkpọ anụ: HASL na-eduga n'efu Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 8 Layer PCB
Dị Solder: Nwepu-Free Ọrụ Nkwụsịtụ: PCB Manufacturing + Components + Assembly Ule: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Nkwado Teknụzụ: DFM efu (Kere maka Nrụpụta) Lelee Ofdị Mgbakọ: SMT, THD, DIP Ọkọlọtọ: IPC-a-610d
Keywords: PCB Population, PCB Assembly Manufacturers, PCB Assembly Assembly, Ọrụ PCB Assembly, Usoro PCB Assembly
1. Anyị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa iji zute nnyefe oge 24 maka PCB nwere ihu abụọ, 48-hour maka 4 ka 8 n'ígwé na 120-hour maka 10 oyi akwa ma ọ bụ PCBs dị elu. Anyị ga-azọpụta gị oge ma ọ bụ na-eri n'ihi na ị na-belata ma na-ahụ ọrụ nke multiple suppliers gụnyere.
2. Anyị nwere njikwa ego maka usoro ọ bụla iji nye ndị ahịa PCB na PCB obere ego ..
3. PCB anyị dị elu sitere na ihe ndị anyị họọrọ, ihe ndị dị elu anyị na-eji, njikwa usoro anyị na-agbaso, njikwa ruru eru na-agbaso na ndị ọkachamara anyị niile.
4. Anyị na-enye ngwa ngwa turnaround PCB ọrụ na ngwa ngwa omume PCB ase. N'ihi na abụọ kwadoro PCB prototype, anyị na-akwado 24 awa ngwa ngwa ọrụ.
Ọrụ PCB turnaround ngwa ngwa
Nzaghachi ọsọ ọsọ maka PCB ajụjụ
24 awa ọrụ ngwa ngwa
Low-akwụ ụgwọ PCB nzukọ
Uru maka Mgbakọ PCB anyị
• niile iferi PCBs bụ 100% ule (E-ule, Solderability ule, FQC na wdg).
• Malite uka mmepụta ma ọ bụ nye nke abụọ prototype PCB nzukọ mmepụta mgbe ahịa gafere niile ule.
• Nyocha AOI na nyocha anya n'oge mgbakọ PCB.
• Iji nyocha X-ray nke BGA na ngwugwu ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
• Ọ bụrụ na achọta nsogbu mgbakọ ọ bụla, ndị injinia anyị nwere ahụmahụ nwere ike idozi ha tupu ebupu.
• Anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ otu idozi niile nzukọ nsogbu na ụgbọ mmiri àgwà bi PCBs gị na oge.
PCB Iwu Quantities
Anyị anaghị ezipụta ọtụtụ iwu PCB. Nwere ike gbanwee Prototype PCB ngwa ngwa. O nweghi ihe o mere ma ọnụọgụ ahụ bụ naanị otu ibe. Anyị na-enye obere na ọkara ogbe na nnukwu iwu.
Ọ bụghị nanị na anyị enweghị chọrọ na mmachi na ukwu, ma n'agbanyeghị ole iji, anyị na-enye ala-na-eri na ngwa-ngwa-mmepụta PCB n'ichepụta ọrụ na nzukọ ọrụ dị ka na mbụ.
N'ihi na ikike ikike, oru-akwụ ụgwọ, akụkụ ahụ mapụtara ị nweta akwụ ụgwọ na ihe ndị ọzọ, anyị anaghị atụ aro ka ị na-ezukọ ngwa ngwa PCBs n'ebe ndị ọzọ. PCBFuture nwere uru pụrụ iche nke ọnụ ala dị ala, teknụzụ nrụpụta kachasị mma, na nnyefe oge.
Ihe PCBFuture na-aga n'ihu na-enyere ndị ahịa anyị aka n'ịmepụta ngwaahịa ndị dị elu na uru kachasị asọmpi na ọrụ ha. Biko kpọtụrụsales@pcbfuture.com maka oru gi ozo.
Nke gara aga: Mgbakọ nzukọ nchịkwa
Osote: Ems PCB Mgbakọ